Farewell Le Professionnel: Onye kpakpando French bụ Jean-Paul Belmondo nwụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Entertainment » Farewell Le Professionnel: Onye kpakpando French bụ Jean-Paul Belmondo nwụrụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Entertainment • Akụkọ Ejiji • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
E lekọtara ihe nkiri Belmondo ihe karịrị nde ugboro 130 na ụlọ ihe nkiri.
Jean-Paul Belmondo nwụrụ mgbe ọ dị afọ 88.
Akụkọ akụkọ ụlọ ọrụ ihe nkiri French nwụrụ.
Onye na -eme ihe nkiri ahụbeghị ahụ ike nwa oge ka ọ nwesịrị ọrịa strok na 2001.
Onye na-eme ihe nkiri sinima nke France bụ Jean-Paul Belmondo, onye gbara ama ama na mba ụwa na ngagharị iwe Jean-Luc Godard New Wave classic “Na-enweghị ume”, anwụọla mgbe ọ dị afọ 88, onye ọka iwu ya kwadoro.
Jean-Paul Belmondo anwụ
Onye na -eme ihe nkiri ahụbeghị ahụ ike ruo oge ụfọdụ na -arịa ọrịa strok na 2001.
Belmondo-ndị na-ege ntị French na-akpọ ya Bebel-ghọrọ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ French New Wave kpakpando na 60s na 70s, ihu ya na-ama jijiji dị iche na njiri mara onye iro ya na onye na-emekọ ihe ọnụ Alain Delon.
Amụrụ na 1933 na Neuilly-sur-Seine dị na Paris nke ọma, nwa onye na-akpụ akpụ "pied-noir" Paul Belmondo, Belmondo gara ọtụtụ ụlọ akwụkwọ onwe onye ama mana ọ dara ogbenye. O gosipụtara mmasị dị ukwuu n'egwuregwu, wee malite ọrụ ịkụ ọkpọ dị mkpirikpi mgbe ọ dị afọ iri na ụma. Mgbe ọ butere ụkwara nta, ọ malitere inwe mmasị n'ịrụ ọrụ, wee tinye akwụkwọ na National Academy of Dramatic Arts, n'ikpeazụ nweta ebe na 1952.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Belmondo malitere ime ihe nkiri na ihe nkiri, na -apụta na egwuregwu nke Anouilh, Feydeau na George Bernard Shaw. O nwetakwara ọtụtụ obere ọrụ ihe nkiri.
Malite na ọrụ ya na Jean-Luc Godard “Enweghị ume,” ọ ghọrọ onye ama ama na sinima New Wave nke France. Ikekwe amara nke ọma maka ọrụ ya na ihe nkiri ihe nkiri na ihe egwu, ya na Romy Schneider na Alain Delon mekwara ihe nkiri. A makwaara ya ka ọ na -eme ihe nke aka ya.
Ahụike Belmondo gbanwere nke kacha njọ na 2001 mgbe ọ dara ọrịa strok wee banye n'ụlọ ọgwụ na Paris, France. Ọrịa strok kpọnwụrụ ya nke ukwuu, ọ ga -ewepụta oge mụta ịmụ ije na ikwu okwu.
O mechara mee ezumike mana ọ laghachiri na nnukwu ihuenyo na 2009 ya na "Nwoke na Nkịta Ya". Ọ ghọrọ fim ikpeazụ ya, ndị nkatọ anabataghị ya nke ọma. Belmondo mechara rịọ mgbaghara maka ọrụ ahụ mana o kwuru na o nyeere ya aka imeri mmetụta na -egbu egbu na ọrịa strok.
Onye ọka iwu ya Michel Godest kwuru na onye omee ahụ nwụrụ n'ụlọ ya na Paris. “Ike gwụrụ ya ruo oge ụfọdụ. Ọ nwụrụ nwayọ. ”
Ndị otu Whatsapp Whatsapp ekwu, sị:
September 19, 2021 na 13: 17
Daalụ maka ịkesa ụdị ozi udo zuru oke biko debe ya.